बलिउड अर्थात हिन्दी सिनेमाका यी पाँच आमा – eRoyaltimes
लकडाउन पहिलो हप्ताको तुलनामा १३६ प्रतिशतले आयात बढेको छ ।
अभिनयका साथै विजनेश चलाउँछन् यी ६ अभिनेत्रीहरु
मंगल ग्रहमा जीवन मिल्न सक्ने सम्भावना
स्वाधिनता बचाउन नसके मुलुक खतरामा पर्छ – ईं. विष्णुप्रसाद वराल
अब राष्ट्रवादीहरुले जित्ने बेला आएको छ – सविन कुमार खड्का
सडक विकास नै कणालीको विकास हो । ई. भण्डारी
प्रेम, दया, ममता, सेवा सबै भावहरूको आधार
मुम्बई : आमालाई भगवान्को उपमा दिइन्छ। सबै व्यक्तिको जीवनमा आमाको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ। सन्तानसँग आमाको विशेष सम्बन्ध हुन्छ। बलिउडको लामो इतिहास हेर्ने हो भने यस्ता धेरै फिल्म भेटिन्छन् जसमा आमालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँसम्म कि केही फिल्मका यी आमाहरू हिरोभन्दा पनि सशक्त देखिएका छन्। सम्झनयोग्य भूमिका यी आमाहरूले निर्वाह गरेका छन्। यहाँ चर्चा गर्न लागिएका यस्ता आमाहरू हुन् जसले निर्वाह गरेको सशक्त भूमिकाका कारण उनीहरू लामो समयसम्म स्मरण मात्र गरिएनन् यसमा आमाको बेग्लै रूप पनि देखियो।
मदर इन्डिया (१९५७) मा नरगिस
यो फिल्मलाई भारतको सर्व श्रेष्ठ फिल्मको सूचीमा गणना गरिन्छ। भारतबाट यसलाई ओस्करमा पठाइएको थियो। आमाको भूमिका नरगिसले निर्वाह गरेकी थिइन्। यो उनको करिअरको सर्व श्रेष्ठ अभिनय थियो। आमाको यो भूमिका र उनको रूप यति लोकप्रिय भयो कि वर्षौंसम्म यस्तो भूमिका फिल्म मेकर्सले दोहो¥याइरहे र सफलता पनि हासिल गर्दै गए। दर्शकले पनि यो भूमिकाबाट मनोरञ्जन लिइरहे। यी यस्ती आमा थिइन् जसलाई उनका पतिले छोडेर जान्छन्। गरिबी, सामाजिक विषमता, सानासाना बच्चा पाल्ने जिम्मेदारीजस्ता कयौं समस्यासँग उनले संघर्ष गरेकी छन्। तर, हिम्मत, संघर्ष, र विश्वासको सहारा उनले कहिल्यै छोडिनन्। उनका दुई छोरा दुई विपरीत दिशामा हिँडेका थिए। गलत बाटोमा हिँडेको छोरोलाई ‘मदर इन्डिया’ गोली हानेर मार्न पनि पछि हट्दिनन्। वास्तवमै ‘मदर इन्डिया’ बलिउडमा आमाको भूमिकाका लागि उदाहरण नै साबित भयो। ‘दिवार’ की आमामा पनि ‘मदर इन्डिया’ की आमा फेला पर्छिन्।
खुबसुरत (१९८०) मा दिना पाठक
यो फिल्मकी केन्द्रीय पात्र पनि आमा हुन् तर यसमा आमालाई फरक रूपमा देखाइएको छ। अनुशासन उनका लागि सर्वोपरि छ। दुःख छ। उनी हाँस्न जान्दिनन्। उनको जीवन घडीको सुईले बाँधेको छ। अनुशासनले कसरी उनको जीवनको आनन्द खोसेको छ ? अनुशासनको बन्धन कसरी खुल्छ र जीवन रसिलो हुन थाल्छ भन्ने कुरा यो कमेडी फिल्ममा देखाइएको छ। आमाको यो भूमिका हिन्दी फिल्मका लागि अनौठो छ।
करण अर्जुन (१९९५) मा राखी
जब राकेश रोशन पुनर्जन्ममा आधारित यो फिल्म बनाउँदै थिए त्यतिबेला दर्शकले यसको कथा पत्याएका थिएनन्। मरिसकेका छोराले पुनर्जन्म लिएर बदला लिन्छन् भनेर एउटी आमाले कसरी विश्वास गर्न सक्छिन् भन्ने प्रश्न तेस्र्याइएको थियो। तर राकेश रोशनले राखीको भूमिका यति सशक्त बनाए कि यी आमाको विश्वासलाई सबैले विश्वास गर्न करै लाग्यो। दर्शकलाई पनि यकिन भयो कि करण अर्जुन फर्कन्छन् र आमाको बदला लिन्छन्। करण अर्जुन टिपिकल बलिउड फर्मुला फिल्म हो तर राखीको भूमिका यति सशक्त भयो कि आज पनि दर्शक उनलाई सम्झन्छन्।
नील बटे सन्नाटा (२०१६) मा स्वरा भाष्कर
घरमा काम गर्ने महिला जसलाई बोलीचालीको भाषामा ‘बाई’ भनिन्छ, यो फिल्मको मुख्य पात्र यही हुन्। यस्तो पात्रलाई केन्द्रमा राखेर सायदै हिन्दी फिल्म बनेका छन्। स्वरा भाष्करले यो भूमिका निवाह गरेकी छन्। यी आमा चाहन्नन् कि आफ्नी छोरी पनि आफू जस्तै बन्नु परोस्। छोरीले पढेलेखेर सरकारी जागिर खाओस् भन्ने उनको इच्छा छ। तर, जब उनले छोरीको ध्यान पढाइमा नगएको थाहा पाउँछिन् उनी आफैं त्यही स्कुलमा भर्ना हुन्छिन्। फिल्ममा यो दृश्य आकर्षक तरिकाले देखाइएको छ। आमाको यो रूप यसअघि कुनै बलिउड फिल्ममा देखिएको थिएन।
मम (२०१७) मा श्रीदेवी
आमा साह्रै कोमल हृदय भएकी र ममतामयी हुन्छिन्। तर उसका सन्तानमाथि कसैको खराब नजर पर्‍यो भने त्यही आमा ‘चण्डी’ को रूप धारण गर्न पनि पछि पर्दिनन्। यहाँकी ‘मम’ एक आधुनिक महिला हुन्। उसका छोरीहरू छन्। छोरीलाई जब अफ्ठ्यारो पर्छ तब यी आमाले आफ्नो शक्ति देखाउँछिन्। – एजेन्सी
कास्टिङ काउचको सिकार शर्लिन
मुम्बई : फिल्म उद्योगमा ‘कास्टिङ काउच’ को घटना बाहिर आइरहन्छन्। यसैबीच, बलिउड अभिनेत्री तथा मोडल शर्लिन चोपडाले कास्टिङ काउचको अनुभव बताएकी छन्। उनले आफ्नो करिअरको सुरुआती दिनका बारेमा बताउँदै कास्टिङ काउचको सिकार भएको खुलासा गरेकी हुन्। चोपडाले करिअरको सुरुआतमा फिल्म निर्माताले खाना खाने बहानामा बोलाउने बताएकी छन्। उनका अनुसार कास्टिङ काउचलाई […]
Royal Times2months ago
चलचित्र निर्माण गर्दै मोडल तथा युवा उद्यमी निनाम
सलमानको फार्म हाउसमा ज्याकलिनको फिल्म
सजिना खनालले जितिन टिन प्रिन्सेस नेपाल ०१७ को ताज
बच्चनलाई प्रश्न: तपाईं प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुभयो भने ?